Sanitereran'ny tanana, mamafa ny otrikaretina - Zhongrong
Afaka mamatsy vokatra toy ny ：
Fanadiovana tànana; 75% famonoana toaka; Hamafa toaka; Fitaovana simika (Ethanol sy Ethyl Acetate)
Miaraka amin'ny traikefa 20 taona mahery mifantoka amin'ny indostrian'ny famonoana otrikaretina mifototra amin'ny R&D, fanamboarana ary marketing, dia natombokay ny marika TECH-BIO, ary tapa-kevitra izahay ny hanao azy io ho marika voalohany ho an'ny indostrian'ny famonoana otrikaretina any Shina satria manana alikaola avo indrindra izahay izay novokarin'ny zavamaniry anay.
Ny fanadio tanana sy ny otrikaretina TECH-BIO dia azo ampiasaina amin'ny toerana be olona toy ny fivarotam-panafody, fivarotana lehibe, hopitaly, trano fandraisam-bahiny, sekoly, sns ary ny fianakaviana koa. Ny vokatra akora simika ataontsika: ny etil éthangol sy etil acétate dia azo ampiasaina amin'ny zavamaniry fivarotam-panafody, indostria simika tsara, sns.
Ny fanadio tanana TECH-BIO sy famonoana otrikaretina dia samy misy alikaola mavitrika 75% izay mahafaty 99,99% otrikaretina mahazatra indrindra ary koa covid-19 hiarovana ny fahasalamantsika manokana. Ny vokatra vokarinay dia nampiana fangaro mando manokana mba tsy handratra ny tanantsika. Hanome vokatra fiarovana tsara kokoa sy tsara kokoa ho an'ny mpanjifa manerantany izahay.
Zhongrong Technology Corporation Ltd (kaody stock: 836455), dia natsangana tamin'ny taona 1999 izay iray amin'ireo orinasam-pirenena Teknolojia avo lenta Shinoa misahana manokana ny R&D, ny famokarana ary ny marketing ny etanol tsy varimbazaha miaraka amin'ireo vokatra any ambany. Izy io no mpanamboatra etanol tsy varimbazaha lehibe indrindra any Shina, ary mpanamboatra acetate lehibe indrindra any Avaratr'i Sina sy Sina Avaratra-Atsinanana.